फिबारो - स्मार्टमे
डोम » Fibaro
पोलिश निर्माता FIBARO स्मार्ट घर निर्माणको लागि समाधानहरू प्रदान गर्दछ। तपाईं नयाँ उपकरणहरू जस्तै सेन्सरहरू वा प्रकाश, तातो वा रोलर ब्लाइन्डहरू लागि नियन्त्रकहरूका बारे पढ्न सक्नुहुन्छ। तपाइँको घर वातावरण स्वचालित जटिल हुनु हुँदैन!
नाइस पोल्स्का र FIBARO को संयुक्त विज्ञापन अभियान
यस वर्षको २ 25 औं वार्षिकोत्सव मनाउने नाइस पोल्स्का कम्पनी धेरै वर्षदेखि खेलकुदसँग, विशेष गरी स्पीडवेसँग नजिकबाट सम्बन्धित छ। २०१I मा नाइस समूहको समूहमा सामेल हुने फिबारोको सहयोगमा उनीहरूले तयारी गरे ...
FIBARO वाली कन्ट्रोलर आयो
Fibaro, फिबारो वाली, FIBARO वाली नियंत्रक
FIBARO वाली कन्ट्रोलर एक बुद्धिमान भित्ता माउन्ट Z-Wave ™ बटन हो जसले दृश्यहरू ट्रिगर गर्न सक्दछ वा अन्य Z-Wave उपकरणहरू सम्बद्धता प्रयोग गरेर नियन्त्रण गर्न सक्दछ। समावेश गरिएको ब्याट्री वा प्रत्यक्ष वर्तमान द्वारा संचालित। उपकरणले वाल्ली बहु-फ्रेमहरू फिट गर्दछ। मुख्य ...
FIBARO बाट डिम्मर २ - लाइटिंग डिम्मरको समीक्षा
द्वारा प्रकाशित	रम्मी
dimmer, Fibaro, अधिक धुंधला
स्मार्ट नियन्त्रणको स्थापनामा प्रकाश नियन्त्रण स्पष्ट कुराको रूपमा देखिन्छ। यो साधारण स्विच अन र अफको बारेमा होईन, तर चमक उपकरण वा अन्य उपकरणहरूको साथ स्वचालन पनि हो। FIBARO Dimmer2मद्दत गर्न सक्दछ।
FIBARO होम सेंटर3लाइट
केन्द्रीय, Fibaro, hc3, HC3 लाइट
हामीसँग FIBARO को बारे मा धेरै राम्रो समाचार छ! कम्पनीले घोषणा गर्‍यो कि यसले एक नयाँ फाटक जारी गरिरहेको छ - फिबारो होम सेन्टर Lite लाइट, जुन एचसी to को सस्तो विकल्प हुनेछ। लक्ष्यको मुख्य फाइदा यसको मूल्य हुनेछ, यो केवल मानिन्छ ...
FIBARO धूम्रपान सेन्सर - धुवाँ सेन्सर समीक्षा
धुवाँ सेंसर, Fibaro, धुवाँ सेंसर
FIBARO धूम्रपान सेन्सर एक सेन्सर छ कि हरेक जेड-वेव स्मार्ट होम उत्साही व्यक्तिसँग हुनुपर्दछ। तर केवल किनभने तपाई यसलाई हजुरआमाका लागि किन्न सक्नुहुन्छ। किन? यसलाई जाँच गर्नुहोस् 🙂
नयाँ रंगको साथ फिबारो वाली
यदि तपाईंलाई राम्रो स्मार्ट होम उत्पादनहरू मनपर्‍यो भने, हामीसँग तपाईंको लागि शुभ समाचार छ। FIBARO ले यसको कालो वाली श्रृंखला जारी गरेको छ! तलको ग्यालरीमा उनीहरू कस्तो देखिन्छन् हेर्नुहोस्।
अधिक पोष्टहरू लोड गर्नुहोस्